Mpanamboatra sy mpamatsy fitambarana poloney - Orinasa mandanjalanja ao Shina
Sanding Disc Holes taratasy fandefasana volamena hanaovana poloney ...
Ambongadiny Green Film Abrasive Tool Disc Sandpaper -L911
XYS maimaim-poana vovoka finday maina (Standard)
Takelaka fantsom-pasika ho an'ny Orbital Sander-A720T tsy mitongilana
Ny famolavolana haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha tsara indrindra-XYS-A2
XYS-A2 Fast Wax dia vokatra iray izay mifantoka amin'ny savoka madinidinika sy ny savoka fitaratra. Izy io dia afaka mamono haingana sy mahomby ireo marika am-pasana tavela aorian'ny famafazana valisoa P1500-P2000 ary hahatratra ny vokatra fitaratra. Ny famolavolana toy ny emulsion avo lenta, avo lenta dia "poloney iray dingana", fahombiazana avo, hafainganana ary haingam-pandeha.
MAFY MANDEHA FANAMPOANA NY FIVORIANA HO AN'NY FIARAHAM-BOLY-XYS-CY0815
Ity vokatra ity dia mpamatsy loko mandoko matihanina ampiasaina amin'ny milina poloney miaraka amin'ny hafainganam-pandeha 1400-2000 rpm. Izy io dia afaka manala am-pahombiazana ny marika fasika amin'ny taratasy sandry P1000-P1200 sy ny gorodona hafa matotra ary ny sosona oksida mahery. Raha mampiasa XYS CY-0187 Wax Polishing tsara dia tsara kokoa ny vokany!
Sampana maimaim-poana amin'ny fikolokoloana fiara-santionany XYS-CY0816
Ity vokatra ity dia mpamatsy loko mandoko matihanina ampiasaina amin'ny milina poloney miaraka amin'ny hafainganam-pandeha 1400-2000 rpm. Afaka manala am-pahombiazana ireo marika fasika P1200 sy taratasy fotsy tsara izy io. Raha mampiasa XYS CY-0818 mpitsabo fitaratra, dia tsara kokoa ny vokany!
Famolavolana poloney metaly ho an'ny buffing Wheels-XYS-CY0817
Izy io dia mpamafa loko mandoko matihanina ampiasaina amin'ny milina poloney miaraka amin'ny hafainganana 1000-2000 rpm. Izy io dia afaka manala amin'ny fomba mahomby ireo marika fasika P1500 sy taratasy fotsy tsara, ary koa manala ireo ratra hafa, lesoka ary sosona oksida hafa!
XYS Agence polishing milina matihanina-CY0818
Ity vokatra ity dia mpamatsy fiara fitaratra matihanina ampiasaina amin'ny milina poloney miaraka amin'ny hafainganam-pandeha 1200-2000 rpm. Afaka manala haingana sy mahomby ny karazana marika rehetra amin'ny loko polishing, mba hahazoana vokatra fitaratra avo lenta!